Sidee ugu habboon qof is qarxin raba loo hor istaagi karaa? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Cabdiwali Tooxoow
Image caption Ciidamada Galmudug oo qabtay nin doonayay in uu isku qarxiyo meel munaasabad ah
Laga soo bilaabo sannadkii 2006-dii, waxaa sii kordhayay qaraxyada ismiidaaminta ah ee ka dhaca dalka Soomaaliya, illaa heer ay gaareen arrin ay dadka u arkaan dhacdooyinka caadiga ah ee la filan karo maalin kasta.
Inta la xusuusto qarixii ugu horeeyay ee ismiidaamin ah ee Soomaaliya ka dhaca waxa lagu qaaday kolonyo baabuur ah oo galbinaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed sannadkii 2006-dii, xiligaas oo uu ku sugnaa magaalada Baydhabo oo si kumeel gaar ah u ahayd fadhiga dowladda Soomaaliya.
Qaraxyadii xigay ee saamaynta badan yeeshay waxa ay dhaceen 2008-dii, waxaa lagu qaaday goobo ku yaala magaalada Hargeysa oo ay ka mid tahay qunsuliyaddii Itoobiya.
Sidoo kale bishii April, 2012-kii, qof soo dhaafay ciidamada amniga ayaa gudaha u galay tiyaatarka qaranka ee Muqdisho, halkaas oo xaflad ka socotay uu qudbad ka jeediyay Ra'isulwasaarihii xiligaas Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, kadibna qofkii oo dumar loo badinayo ayaa is qarxiyay, waxaana dhintay mas'uuliyiin sarsare oo dowladda ka tirsanaa.
Sanadihii dhowaa qaraxyada ismiidaaminta waxa ay noqdeen kuwa joogto, waxayna geysteen qasaaro aad u badan.
Dad badan oo ay xitaa ka mid yihiin xeeldheerayaasha amniga ayaa isweeydiiya sida ugu habboon ee looga hortagi karo qaraxyada ismiidaaminta ah, waxaana jira fikrado badan oo maangal ah oo arrintan ku saabsan.
Balse askari ka tirsan ciidanka dowlad goboleedya Galmudug ayay u egtahay in uu la yimid sifo ka mid ah sifooyinka ugu wanaagsan ee looga hortagi karo qarax ismiidaamin ah.
Weeraro ismiidaamin ah oo lagu qaaday Masaajidyo ku yaalla Afqaanistaan
40 qof oo ku dhimatay weerar Ismiidaamin ah oo ka dhacay Yemen
19 qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Dimiqshiq.
Axmed Xuseen Diiriye oo ka mid ah illaalada gaarka ah ee madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ayaa shalay fashiliyey fal la doonayay in lagu qarxiyo munaasabad ciidamo ay gaaddo-ka-ciyaar soo bandhigayeen gudaha magaalada Guri Ceel.
Ka sokoow in foojignaanta iyo fiidhoonaanta Axmed, oo ah waxa askari kasta laga doonayo, uu ku gartay in ninka uu qarax waddo, ayaa haddane tallaabada uu qaaday ee uu ku fashiliyay qaraxa waxa uu ku muteystay ammaan badan. Haddaba muxuu sameeyay?.
Waakan isaga oo sharaxaya "Aniga waxaan ahaa illaalada koowaad, markii ay xafladdii sii dhamaanayso ayuu ninkani ii yimid, wuxuuna i yiri waxaan soo jeedinayaa gabay, markaas ayaan dareemay in uu wax kale waddo, markaas ayaan go'aansaday in dhagar qabahan aan labadiisa gacmood ku dhego, oo aanan siideynin inta ay madaxdu ka baxayso, kadibna ciidamada amniga ayaa igu gacan siiyay in uusan is nuuxnuuxin, kadibna waxaa nasoo gaaray ciidamada sida gaarka u tabobaran ee qaraxyada furfura".
Inkasta oo ay qaraxyada dhaca aad u kala duwanyihiin, qaarkoodna lagu soo rakibo baabuur xawaare sare ku socota oo ay adagtahay in isla markaas laga hortago, ayuuse askarigan kasbaday ammaan iyo bogaadin badan oo kala timid bulshada qeybaheeda kala duwan.
Maalintii arbacadii, qarax ka dhacay meel u dhow Taalada Daljirka Dahsoon ee Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay dad dhawr ah oo uu ka midyahay wasiirkii hore ee arrimaha dibedda ee Soomaaliya Xuseen Ceelaaba Faahiye.